Rapara n'ụlọ n'oge oge ndị a a na-ejighị n'aka? Na-achọ mgbe niile ịbanye na foto? Lee anya ọzọ n'ihi na onwe-Eserese foto bụ azịza gị nye ajụjụ gị niile. Eserese eserese onwe gị na-achọ naanị onwe gị na igwefoto, ma ọ bụrụ na emee nke ọma, nwere ike ịme ụfọdụ post kwesịrị ekwesị nke Instagram iji bie nri iche iche gị. Lee ụfọdụ echiche iji bido!
Mbanyeghachi ihe mkpuchi ọkacha mmasị gị
Album na-ekpuchi bụ ezigbo isi iyi nke mmụọ nsọ. Site na soft indie ruo rap dị egwu, ihe mkpuchi album na-enye ụdị ọnọdụ dị iche iche ịhọrọ site na. Tụkwasị na nke ahụ, a na-agba ọtụtụ mkpuchi album na ụlọ ọrụ na-eme ka ọ dị mfe ịse n'ime ụlọ nke gị.
Mee Onwe Gị Protrait 3D
Iji 3D foto ngwa dika LucidPix, I nwere ike gbanwee foto gị n'ime 3D, enweghị igwefoto pụrụ iche chọrọ! Foto 3D tinye omimi na foto gị, yabụ ị nwere ike ịmepụta ihe n’ezie na gbaa gị. Were echiche ọ bụla site n'elu wee mee ya 3D ma ị nwetara foto ọhụrụ ọ bụla! Site na ime foto gị 3D ị nwere ike ime ka ọnọdụ foto gị dịkwuo elu ma buru ya na ọkwa ọhụrụ.
Weta n'èzí ahụ n'ime
Nke a bụ maka niile osisi-hụrụ n'èzí. Ugbu a ụmụ ọhụrụ gị ga-enweta foto ahụ! Ọ bụrụ na ị nwere osisi ụlọ ị na-atọgbọ, dozie ha n'ihu ala ma hụ ma ị ga-enwu gbaa n'anwụ gị. Nke a na-eme ka udo dị n’udo.
Tinyegharịa otu akwụkwọ akụkọ
Magazine kpuchie bụ ihe ọzọ dị mma sitere n'ike mmụọ nsọ. A na-amata magazin ejiji dịka Vogue maka mkpuchi ha na-adọrọ adọrọ, yabụ ị nwere ike isi n'ike mmụọ nsọ nweta ha. Site na-na-studio Ome ka nnukwu n'èzí, magazin emewo ka ị kpuchie.
Jiri Agba na Eserese Onwe Gị
Agba bụ ngwá ọrụ dị ike mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi. Ọ nwere ike ịkọ akụkọ niile ma gosipụta mmetụta. Nwere ike tinye ya n’ahụ gị, were ya tee agba azụ, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Enwekwara ọtụtụ ụdị agba dị iche iche iji nwaa ihe dịka agba ojii na neon agba. Eluigwe bụ oke!
Ihe na-adọrọ mmasị iji rụọ ọrụ bụ gosipụtara omume. Ọ bụ ezie na ọdịnala ị ga-ese foto gị na enyo, ị kwesịrị ị maa onwe gị aka iji enyo n'ụzọ ndị ọzọ. Jiri ọtụtụ enyo iji mepụta mmetụta kaleidoscope. Enyo mebiri emebi ma ọ bụ iberibe enyo maka mmetụta na-enweghị isi. Enyo nwere ike itinye ihe omimi nke ihe omimi na foto gi, ya mere atula egwu iji ya!
A ga-etinye echiche a n'ọrụ na post-mmepụta, karịa na studio. Dezie isi ihe dị na foto gị dị ka ikpughe na agba, were ya na nke gị ọkacha mmasị illustrator ngwa ma malite ịtinye ihe atụ! You nwere ike ịdọrọ na ya, ma ọ bụ ọbụna were ụfọdụ foto vector na ntanetị wee gbakwunye na foto ahụ. Ọ nwere ike ịgbakwunye ihe egwuregwu dị na eserese gị ma ọ bụ ọbụlagodi nke dị njọ, dabere na eserese ị na-eji.
Naanị n'ihi na ị rapaara na studio apụtaghị na ị ga-arapara n'okirikiri gị! Mee ihe site na ime ụlọ gị ma jiri echiche anyị dị n'elu maka mmụọ nsọ. Echefukwala ikpori ndụ n’oge mgbanaka gị!
Atụmatụ ahụike maka ahụike →← Ihe 4 To Ga-eburu n’uche Mgbe Fashion Na-eme Ihe Ejiji Ejiji
Etu esi ejikwa Foto App na iPhone iOS 14
Top 10 Best Landscape Photography Were site Ndị Njem Worldwa
Animal Photography: 9 Atụmatụ maka Pụtara gbaa
Otu esi eme udo ekele mgbe ị na-ekpuchi
Aka Atụmatụ N'ihi N'onwe Gị Wedding Photography